Dhageyso:-Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Xaaf Diiday dib u heshiisiin | allsaaxo online
Dhageyso:-Madaxweyne Farmaajo oo sheegay in Xaaf Diiday dib u heshiisiin
Published on May 16, 2019 by said · No Comments
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay kulamadii uu Garoowe kula qaatay Madaxweynaha Galmudug iyo ismarinwaagii dhexmaray,isaga iyo Madaxweynaha Galmudug.
Waxa uu sheegay Madaxweynaha in Madaxwehne Xaaf uu dalbaday waqti kororsi balse ay u soo jeediyeen in dib u heshiisiin laga sameeyo,hayeeshee taasi uu ka horyimid Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf.
Madaxweyne Farmaajo ayaa si kaftan ah u soo qaatay in qofkii xanuunsan loo baahan yahay in uu maro saddex marxaladood oo kala ah in marka hore uu aqbalyo in uu xanuun sanyahay iyo in la baaro xaaladiisa iyo cudurka uu qabo iyo qeybta Saddexaad oo ah in daawo loo qaro balse Madaxweyne Xaaf uu diiday daawadii la siiyey.
Khilaafka u dhaxeeya Madaxda Dowladda Federaalka iyo Maamulka Galmudug ayaa weli taagan kaas oo saameyn ku yeeshay Shaqooyinkii Maamulkaas,waxaana xusid mudan in dhankooda Madaxda ugu sareysa Maamulka Galmudug uu khilaaf ka dhaxeeyo.
halkaan ka dhageyso codka madaxwaynah